RASMI: Tababarihii hore ee Heegan Cusmaan Aayarta oo loo magacaabay Macallinka cusub ee Kooxda… – Gool FM
(Muqdisho) 10 Feb 2020. Macallinkii hore kooxda kubadda cagta Heegan ee Cusmaan Aayarta ayaa loogu magacaabay tababaraha hoggaamin doona Naadiga Saxafi FC, taasoo ka dheesha horyaalka heerka labaad ee dalka.
Tababare Cusmaan Aayarta ayaa kooxda Heegan hogaaminayay tartankii koobka General Daa’uud ee sanadkii dhammaaday 2019, laakiin nasiib uma yeelan in horyaalka iminka socda inuu sii leyliyo, waxaana lagu badalay macallin Mahad Meykon, kaddib bandhig aan loo riyaaqin oo ay soo bandhigtay kooxda Heegan.
Cusmaan Aayarta ayaa kooxda Heegan xilligii uu ciyaaryahanka ahaa wuxuu kula guuleystay hal horyaal fasal ciyaareedkii 2014-15.
Kooxda Heegan waxa uu ugu soo biiray naadiga S.I.T.T Daalo sanadkii 2009-kii, isagoo Aayarta waqti badan la qaatay kooxda ciidanka.
Tababare Cusmaan Aayarta ayaa wareysi uu siiyay Idaacadda Gool FM waxa uu kaga warbixiyay magacaabista Kooxda Saxafi FC waxaana uu yiri: “Aad ayaana ugu faraxsanahay inaan leyliyo Kooxda Saxafi waxaan rajayna inaan meel wanaagsan gaarsiiyo.”
Kooxda Saxafi ayaa kulankii shalay ay la dheeshay naadiga Jamhuuriya waxa ay ugu adkaatay 3-1, xilli macallin Aayarta uu ahaa kulankiisii ugu horeyay, wuxuuna helay saddexddii dhibcood ee ugu horreysay isagoo macallin u ah.